Anguilla dia nantsoina hoe Destination lafo vidy amin'ny taona 2018
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Anguilla dia nantsoina hoe Destination lafo vidy amin'ny taona 2018
An-dalam-pandresena i Anguilla, mahazo fankalazana avy amin'ireo matihanina amin'ny dia sy ireo mpankafy mpanjifa mafana fo. Ny farany dia ny loka Destination of the Year ho an'ny taona 2018, natolotry ny Classical Vacations, mpivarotra ambangovangony fialan-tsasatra # 1 ho an'ny Travel Advisors.
Ny fanambarana dia natao tao amin'ny CHTA Caribbean Travel Marketplace, fivorian'ny mpivarotra voalohany any Montego Bay nanomboka ny 29 - 31 Janoary 2019.
"Faly izahay fa nahazo an'ity loka malaza ity, indrindra manoloana ireo fanamby natrehinay sy ny fiverenanay mahatalanjona notanterahinay," hoy ny Hon. Cardigan Connor, sekretera parlemantera ao amin'ny minisiteran'ny fizahantany any Anguilla. "Fankalazana ny asa mafy sy ny fanoloran-tena ataon'ireo mpandray anjara rehetra amin'ny indostria eto amintsika izany, ary ny hambom-po hitehirizantsika ny hatsaran'ny vokatra fizahan-tany," hoy izy namarana.
Ny fialan-tsasatra mahazatra dia manolotra trano misy kilasy an'izao tontolo izao, tombontsoa manokana ary serivisy tsy manam-paharoa ho an'ireo mpanolotsaina momba ny dia, miantoka ny traikefa fialan-tsasatra tsara indrindra ho an'ny mpanjifany.
Mampiroborobo ny fanatanjahantena, ny fanabeazana ary ny ala Jamaikana ny klioban'ny tryall
Fanambarana Airbus momba ny trangana cyber